Google Instant Dudziro Inowedzera chiJapan kuRondedzero yeMitauro Inotsigirwa | IPhone nhau
Muturikiri weGoogle ave chimwe chezvishandiso anonyanya kushandiswa kutenderera pasirese kune avo vanoda kuturikira chirevo kana izwi zvikuru sei. Nekuda kweiyo interface yeapp, chishandiso ichi chakagadzirirwa kuturikira magwaro marefu, nekuda kweizvi tinogona kuwana nhamba hombe yekushandisa muApp Store, senge Muturikiri, chishandiso chinotibvumidza kuti tishandure zvinyorwa pakati pemitauro makumi mashanu neshanu uye kuti kubvira nezuro zviripo zvekurodha mahara kwenguva yakati rebei. Iko kuwanikwa kweshumiro yekushandura Izwi Lens neGoogle, makore matatu apfuura, anga ari kumberi uye shure kwemushanduri, nekuti iko kunyorera kunotibvumidza kushandura zvinyorwa tichishandisa yakawedzera chokwadi uye kamera yechishandiso.
Asi chakanakisa pane zvese izvi ndechekuti chinotibvumidza kuzviita pasina kuve neinternet kuwana, izvo zvinoita kuti chive chikumbiro chakanakira patinoenda parwendo uye tiine matambudziko akakomba ekunzwisisa mutauro wenyika yatinoshanyira. Dudziro chiriporipocho, sekudanwa kwakaitwa sevhisi sevhisi nekamera achangobva kugashira mutauro mutsva kunyaya yeavo vanotsigirwa parizvino: chiJapanese, kunyangwe parizvino ari iye chete anokwanisa kushandura kubva kuJapan kuenda kuChirungu uye zvinopesana.
Pari zvino Vashandisi vanotaura chiSpanish vanozofanira kumirira kuenderana kweJapan neSpanish uye zvinopesana, chero bedzi tisina pfungwa dzeChirungu. Iri basa raive ratovepo kuburikidza nezvakatora zvataive nazvo pane yedu kifaa pamwe nekunyorwawo zvinyorwa, asi kubva zvino zvichienda mberi tinogona kuzviita munguva chaiyo, tisingatore kutora zvinyorwa zvega zvega zvinyorwa zvatinoda kududzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Shanduro yeGoogle chiriporipo inowedzera chiJapane kunyaya yemitauro yakatsigirwa
IOS 10.3 Ruzhinji Beta Zvino Ravepo